Firefox ine yakasikwa system yekuisa webapps | Linux Vakapindwa muropa
Wanga uchiziva here kuti Firefox ine yakasikwa system yekuisa webapps? Tinokuratidza maitiro ekuishandisa uye ekuishandisa
Kunyangwe ini pachangu ndajaira kushandisa akawanda masevhisi mubrowser, chokwadi ndechekuti nguva nenguva ndinoramba ndichitarisa maitiro ekuisa webapps pane yangu yekushandisa system pasina zvinoenderana neChannel. Zvikurukuru, zvandinoda zviri Firefox yemuno webapps, uye ichi chiitiko chinogona kuvanzwa (chakaremara nekutadza) mubrowser kubva ku v73 zvimwe chete. Muchikamu chino tichakuratidza maitiro ekuishandisa.
Izvo zvatinoenda kutsanangura maitiro ekumisikidza rutsigiro rwekuisa SSB, Ndicho chirevo cheSiti-Yakanangana neBhurawuza. Iyo PWA (Progressive Web Apps) rudzi rweSSB. Zvatichawana iri rakaparadzaniswa rebrowser hwindo isina ayo mashandiro, asi izvo zvinoshanda zvakakwana mumasevhisi akadai seTwitter. Notification inoshanda, kunyangwe pachezvangu ini ndaida ivo kuti vavandudze zvishoma mune izvi.
1 Maitiro ekugonesa SSB nePWA rutsigiro muFirefox
2 Maitiro ekubvisa maapp
Maitiro ekugonesa SSB nePWA rutsigiro muFirefox
Kana tikashandisa Firefox 73 kana gare gare, tinoenda ku URL bar uye tinyore pamusoro: config. Kana iri kekutanga kuwana, tichaona chiziviso chekuti tiri kupinda munzvimbo ine njodzi. Tinogona kuzvigamuchira kana kukumbira iwe kuti usatizivise zvakare.
Mune mabhurawuza marongero, tinotsvaga "ssb" isina makotesheni. Chatinofarira ndiyo paramende "browser.ssb.enabled".
Tinobaya kaviri pairi kuti ichinje kubva "kwenhema" kuenda ku "chokwadi". Tinogona zvakare kugadzirisa kukosha nekukanya kurudyi, asi kubaya kaviri kunokurumidza.
Isu tinotangazve bhurawuza.
Kuti tigadzire webapp, tinoenda kune webhusaiti webhusaiti, kune iyo huru peji uye zvirinani tisina kana kupinda mukati.
Tinodzvanya pamadota matatu kurudyi kweiyo URL bar.
Isu tinosarudza sarudzo «Shandisa Iyi Saiti muApp Mode». Izvozvi iri muChirungu, kusanganisira vhezheni 81 iyo parizvino iri paNightly chiteshi. Uye ndizvo chete. Kana yangogadzirwa, ichavhura muhwindo rakazvimiririra idzva.
Pari zvino, muWindows inoitwa zviri nani kupfuura muLinux, nekuti mune yeMicrosoft system inogadzira icon mumenyu yekutanga uye zvese. Uye zvakare, iyo logo yebasa (iyo "favicon") inowanikwa mune yepasi pane, nepo muLinux icon yebrowser inoonekwa. Tichifunga nezvekuti basa rakaremara nekukanganisa, ini ndoda kufunga kuti Mozilla ichaenderera ichishanda pairi nekuigadziridza zvakare muLinux kuitira kuti igadzire iyo nzira pfupi, inoonekwa mune yekushandisa menyu uye icon mune akadzika mapaneru kana madoko .
Maitiro ekubvisa maapp
Uninstall Anwendung Firefox webhu ibasa rakareruka. Isu tinongofanirwa kuenda kubhamburger, tinowana chikamu icho chiripo zvakare muChirungu uye chinoonekwa se "Sites muApp Mode" uye tinya pa "x" inoonekwa padhuze newebhu webhu. Kana tikadzima ese maappapps, iyo "Sites muApp Mode" sarudzo inonyangarika, asi isu tinogona kuzvimisikidza nekutevera dzidziso yakatsanangurwa pamusoro. Kana isu tisingade shanduko kana chero chikonzero chatinoda kuti Firefox idzokere pachimiro chayo chepakutanga, isu tinongofanirwa kuita nhanho 1 kusvika ku4 nenzira yakapesana.
Iko kugona kwekuisa Firefox-yakavakirwa maapplication nenzira iyi kwave kuwanikwa kubvira Kukadzi uye ichiri kuenderera nhasi Chita "chekuyedza". Isu tese tinoziva kuti izvi zvinorevei: isu tinokwanisa kuwana ese marudzi ekukundikana kana kukanganisa, kunyanya muLinux, uko izvo zvatinoona mudoko kana pazasi pani iri rimwezve bhurawuza hwindo iro rinopindirana nevamwe kana rakagadziriswa nenzira iyoyo. Ini ndinofunga Mozilla inofanirwa kuramba ichishanda kuitira kuti, zvirinani, iite senge Chrome, ndiko kuti, kugadzira .desktop kuti tikwanise kuvhura iyo app kubva kune akasiyana application mamenyu uye kuti iyo icon inoonekwa ndiyo favicon yebasa, uye kwete iyo yeFirefox iyo inogona kukonzeresa nyonganiso.
Pane here webhu kunyorera iwe yauchamisa uchishandisa iyo sisitimu yakatsanangurwa muchinyorwa chino?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Wanga uchiziva here kuti Firefox ine yakasikwa system yekuisa webapps? Tinokuratidza maitiro ekuishandisa uye ekuishandisa
guru, rinoshanda zvikuru.